Vaovao - Indostria Fiberglass Global
Indostria Fiberglass manerantany
Ny tsenan'ny fiberglass manerantany dia vinavinaina hitombo amin'ny $ 7 Billion, entin'ny fitomboana mitombo 5, 9%. Glass Wool, iray amin'ireo fizarana nofakafakaina sy habe amin'ity fanadihadiana ity, dia mampiseho ny mety hitombo amin'ny 6 mahery.
04 Febroary 2020 13:58 ET | Loharano: ReportLinker
New York, 04 feb 2020 (GLOBE NEWSWIRE) - Reportlinker.com dia nanambara ny famoahana ny tatitra "Indostria Fiberglass Global" - https://www.reportlinker.com/p05798567/?utm_source=GNW
8%. Ny fiovan'ny fihetsiketsehana manohana ity fitomboana ity dia mahatonga ny orinasa ho lehibe amin'ity sehatra ity hanaraka hatrany ny fiovan'ny tsena. Vonona ny hahatratra mihoatra ny US $ 6,2 Miliara amin'ny taona 2025, hitondra fitomboana mahasoa ny Glass Wool
Fihetseham-po lehibe amin'ny fitomboana manerantany.
- Misolo tena ny tany mandroso, hitazona ny tanjaky ny fitomboana 5% i Etazonia. Ao Eropa, izay mbola mijanona ho singa manan-danja amin'ny toekarena manerantany, dia hampiditra $ 250 tapitrisa US $ amin'ny haben'ny faritra ary
fitafiana ao anatin'ny 5 ka hatramin'ny 6 taona ho avy. Mihoatra ny $ 210.9 tapitrisa ny fangatahana vinavinaina ao amin'ny faritra dia ho avy amin'ny tsenan'ny Rest of Europe. Any Japon, ny Glass Wool dia hahatratra ny haben'ny tsena US $ 241,3 tapitrisa amin'ny faran'ny fotoana famaranana. Amin'ny maha-toekarena faharoa lehibe indrindra an'izao tontolo izao azy sy ilay mpanova lalao vaovao eo amin'ny tsena manerantany, dia mampiseho ny mety hitombo 8,8% mandritra ny roa taona ho avy i Sina ary manampy eo amin'ny 1,9 Miliara dolara amerikana eo ho eo amin'ny fotoana mety ahazoana misafidy amin'ny
ireo mpandraharaha maniry sy ireo mpitarika mailo azy ireo. Atolotra amin'ny sary manankarena ara-pahitana ireo sy ireo angon-drakitra marobe ilaina ilaina mba hahalalàna fa zava-dehibe amin'ny fiantohana ny kalitaon'ny fanapahana paikady, na fidirana amin'ny tsena vaovao na fizarana loharano.
ao anatin'ny portfolio. Antony makroekonomika marobe sy ny herin'ny tsena anatiny no handrafitra ny fitomboana sy ny fivoaran'ny lamina fitakiana any amin'ireo firenena misandratra ao Azia-Pasifika, Amerika Latina ary Moyen Orient. Ny fomba fijery fikarohana rehetra aseho dia
mifototra amin'ny fandraisana andraikitra voamarina avy amin'ny influencers eo amin'ny tsena, izay ny heviny dia mihoatra ny fomba fikarohana hafa rehetra.